London To Paris In 2:20 saacadaha Tareenka Eurostar | Save A tareenka
Home > safarka Europe > London To Paris In 2:20 saacadaha Tareenka Eurostar
Waqtiga Akhriska: 10 daqiiqo(Last Updated On: 14/05/2020)
Mid ka mid ah caadi ugu ah iyo siyaabaha ugu fudud in safarka u dhexeeya London iyo Paris waa via Eurostar, tareenka-xawaaraha sare ee isku xira labada caasimadaha. Inkasta oo ay jiraan ogaaaday fursadaha u safraya raadinaya si ay u sameeyaan hop ah, Eurostar weli mid ka mid ah fursadaha ugu fiican ee xawaaraha, kharashka, iyo raaxo. Tareenka ayaa faa'idaysanayo tunnel quuska channel, ama “chunnel,” dhisay dhexeeya England iyo France si ay dhaqso aad u hesho si aad u socoto.
Hoos waxaa ku qoran, waxaad ka heli kartaa dhammaan faahfaahinta aad u baahan doontaa in aad caawimo aad u maamuli lahayd London safar Paris Eurostar.
Maqaalkani waxa la qoray si loo baro macaamiisha ku saabsan safarka tareenka oo waxaa looga dhigay by Save A tareenka, Bogagga Tigidhada Tareenka ee ugu raqiisan Yurub.
Maxaad Travel Europe By tareenka?
Ka hor inta aynaan bilaabin, ee tirada ha dhab ahaan sababta Europe waxaa sida ugu wanaagsan la kulmay via safarka tareenka- ka dib oo dhan, qaaradda this ayaa deggan yahay kumanaan sano, taas oo macnaheedu yahay in ay kaabayaasha waxaa inta badan xeel. hababka kale ee gaadiidka waa si fudud la heli karo, laakiin waxaa jira wax in la sheegay in jaceylka uu grand safarka tareenka. Tani waa run gaar ahaan loogu talagalay dadka safarka ah markiisii ​​ugu horeysay ee, who can take advantage of train schedules to hop on board just before it departs. Tani waa in la barbardhigo qoto dheer in garoomada diyaaradaha Yurub, halkaas oo waqti yimid ugu yaraan ka hor tegi lahaa waa ugu yaraan laba saacadood, iyo waqti dheeraad ah iyo lacag musaafo waxaad bixisaan meesha garoonka diyaaradaha.
Isagoo ka hadlayay waqtiga safarka, Europe waxaa si fiican u yaqaan for xadiidka xawaaraha sare ee ay ku-, taas oo ilaa hadda ka badato waxa loogu fuuli jiray jidadka waawayn iyo garoomada diyaaradaha inconveniently ku yaalla ay. Tareenadu oo dhan qaaradda waa deg deg ah oo inta badan si toos ah, taas oo macnaheedu yahay mee waqti yar oo waqti dheeraad ah sahaminta.
tareenada sidoo kale waxay leeyihiin faa'iido ah ee la haboon oo ku yaalla meelo dalxiiska waaweyn iyo soo jiidashada, so it’s easy to step off your train and head directly to your destination.
Ugu dambeyntii, tigidhada tareenka waa dhan yahay, oggolaadaan in aad soo dejin boorsooyinka iyo dooran kursi adiga oo aan bixin lacag dheeraad culus.
Waxaas oo dhan waa in la yiraahdo, halka Europe ayaa fursado badan dadka u safraya, waxba jir ah safar tareen wanaagsan garaaca.
London ilaa Brussels Eurostar Tareenada
London ilaa Paris Eurostar Tareenada
Lyon to London Eurostar Tareenka
London ilaa Amsterdam Eurostar Tareenka
Tayaasha Your Ticket On A Eurostar tareenka
Mid ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan ee tareenka lagu qaado iyo diyaaradda waa in Eurostar-ka uu ka socdo bartamaha magaalada illaa bartamaha magaalada. madaarada fog ka duwan sida London Heathrow iyo Paris Charles De Gaulle, aad tareenka ka tegey London St-Pancras International oo gaaray Gare Du Nord, halkaas oo aad si fudud u socon karaa dhamaan indhaha ugu fiican ee magaalada.
Sida ku xusan, tikidhada oo dhan Eurostar ka mid ah ugu yaraan laba xabbadood oo boorsooyinka iyo boorsada gacanta a. Haddii aad u keeno badan oo boorsooyinka, sidoo kale waxaad dooran kartaa tigidh sare fasalka u ogolaanaya inay keenaan bacaha more. Marka la barbardhigo, diyaaradaha miisaaniyadda laga yaabaa in ka yar jaale hore ay, laakiin ajuurada bac iyo kharashka doorashada kursiga si deg deg ah ku dar ilaa.
Qiimaha tikidhada safarka this u muuqdaan in ay is beddelid badan, sidaa darteed waxaan ku talinaynaa in tikidhada iibsato sida ugu dhaqsaha badan aad tahay awood. Guud ahaan, tigidhada kuwan iska on sale saddex bilood ka hor, In kastoo ku xiran tahay xilli aad sidoo kale ka heli kartaa ilaa lix bilood ka hor. Waxaan ku talinaynaa isticmaalaya website si aad u hesho oo jartaan tikidhka tareenka aad, taas oo si toos ah u baadhaa oo dhan alaabada la heli karo si aad u hesho qiimaha sicirka suurto gal, damaanad qaaday.
London ilaa Antwerp tareenka Eurostar
Lille ilaa London Eurostar Tareenka
London ilaa Strasbourg Eurostar Tareenka
London ilaa Rotterdam Eurostar Tareenka
Binta iyo noocyada Tigidhada
tareen Eurostar wuxuu ku shaqeeyaa qolalkii saddex-fasalka, iyadoo ku xiran miisaaniyada. Waayo, kuwa si fudud u raadinaya in ay helaan mid ka mid meel kale, tigidhada fasalka labaad waa ikhtiyaarka ugu fiican. Kuwa on safarka ganacsiga halkii door bidaan karaan tigidh Standard Premier ama Business Premier, labadaas arrimood oo laguu ogolaado in aad si fiican ugu fariisan in tababarayaasha fasalka-koowaad iyo in la siiyo cuntada ka inta lagu guda jiro safarka, Markaa waxaan u oggolaanaynaa inaan wax yar ka ogaano London illaa tikidhada tareenka ee Paris:
Nooca Fare waxyaabaha lagu raaxeysto Xadidaada
2 gogo 'oo bac boorsooyinka iyo hal gacan ka mid ah
doorashada kursiga diyaar ah ka dib jaale
Cuntada la iibsan karaa
Non-celin. Ka hor inta bixitaanka tareenka, waxaad bedelan kartaa tigidhka. lacag A isbedel ah 40 Euro iyo qiimaha faraqa u khusaysaa. Haddii tigidhka cusub waa ka raqiisan yahay tigidh asalka, farqiga qiimaha ma noqon doonto celinayo.
kuraasta la casriyeeyay ciyaari legroom dheeraad ah iyo waayo-aragnimo premium a
cuntada fudud iyo cabitaan loo adeego doonaa, kursigaagu
Non-celin. Ka hor inta bixitaanka tareenka, waxaad bedelan kartaa tigidhka. lacag A isbedel ah 50 Euro iyo qiimaha faraqa u khusaysaa. Haddii tigidhka cusub waa ka raqiisan yahay tigidh asalka, farqiga qiimaha ma noqon doonto celinayo.
3 gogo 'oo bac boorsooyinka iyo hal gacan ka mid ah
cuntada kuugga loo qorsheeyay iyo champagne loo adeego doonaa, kursigaagu
Helitaanka Saaladda gaar ah ka hor ka tagay
adeegyada jaale Taxi waxaa laga heli karaa
kansal Free iyo is dhaafsi aan xad lahayn ilaa 60 maalmood ka dib bixitaanka dhammaan waddooyinka u dhexeeya UK, France iyo Belgium.
kansal Free iyo is dhaafsi aan xad lahayn ilaa departure on wadada si toos ah u dhexeeya UK iyo Holland, oo lagu daray is-weydaarsiga free on wadada aan toos ahayn (Thalys / Eurostar via Brussels) ilaa bixitaanka.
Sida aan soo sheegnay ka hor, binta kala duwan yihiin sida ay taariikhaha safarka aad, sidaas darteed waxaad u baahan tihiin inaad ballan mar helitaanka furmay. If you book far enough in advance, aad doonaa in la raadinaya in ay bixiyaan oo ku saabsan 55 dollar hal hab, ama 90 dollar wareega safarka. Sugitaanka ilaa daqiiqada ugu danbeysa eryi karaa qiimaha samada sare, kharashka ku dhow laban laabmay dambe aad ka iibsan tigidhka. Tani waa run labada wareega-safarka iyo hal hab tikidhada.
Waa xusid mudan in Eurostar ah aan la heli karin kuwa qaban pass xadiidka ah oo dhan, sidaa darteed haddii aad rabto in aad ka dhigi safar this sasabasho ah oo la awoodi karo, gadato tikidh tareen aad ka hor. Waxaad ka heli kartaa tigidhada tareenka online at websites kala duwan, inkastoo qiimaha tigidhada tareenka lagu badbadiyay laga yaabaa in la barbar dhigo Save A tareenka.
Calais to London Eurostar tareenka
Baabuurta loo yaqaan London Eurostar Tareenka
The Hague to London Eurostar Trains
Tareenada Berlin ee London ilaa London
Hubi-In At London St Pancras-Station
Iyada oo ku xidhan fasalka rakaab, aad rabto doonaa si ay u yimaadaan xarunta bixitaanka ugu yaraan 40-60 Daqiiqado kahor inta uusan tareenka ka bixin magaalada london iyo paris. Haddii aad ballansatay tikityada ugu horreeya ee Ganacsiga Ganacsiga ee London ilaaParis, aad leedahay doonaa helaan saaladda gaar ah. Haddii kale, waxaa jira dukaamo iyo makhaayado badan oo la heli karo si aad u gudidoodu. Qaar ka mid ah maqaayadaha aannu u jecel waxaa ka mid ah:
Amt Coffee – dukaan A kafeega leh laba goobood saldhigyada gudahood. Waxay bixisaa cabitaanka handmade iyo koobabka si buuxda la burburin karo, taas oo ka dhigaysa dhoola deegaanka.
Foosto wareegga – A baar dhaqanka Ingiriisi in qamri dalabyo farsamada, ale dhabta ah, siriqda, kafeega, iyo jinniyadooda. Waxa kale oo ay u adeegtaa quraacda iyo rakaab baar classic.
Chop'd – makhaayad caafimaadka-diiradda A, Chop'd waxay bixisaa noocyo kala duwan oo maraqa, saladh, Digsi iyo dhanbiilaha waayo, dhammaan noocyada kala duwan ee dadka safarka ah.
Haddii ay dhacdo in aad samaynta kaliya safar maalin, saldhiga sidoo kale goobaha bidix boorsooyinka si aad u kaydiso boorsooyinkaaga. fursadaha kaydinta Kuwanu waa raqiis ah oo inta badan bixiyaan saacadaha adeegga la dheereeyey.
Cologne to London Eurostar Tareenka
Ghent in London Eurostar Tareenka
Middelburg to London Eurostar Trains
Leiden ilaa London Tareenka Eurostar
Saarnaayeen Eurostar tareenka
Marka saarnaa, waqtiga safarka guud ahaan ka soo London in Paris waa qiyaastii 2 saacadood oo 16 daqiiqo. Weheliso aad timaado pre-bixitaanka, wadarta wakhtiga safarka ahaan agagaarka doonaa 3 saacadood.
Tareenka ayaa laftiisa qoreysa fadhiga caadiga ah iyo sidoo kale miisaska in aad u ogolaato in ay shaqada iyo fudayd cuni. Kuwani waxay u muuqdaan in ay ku ballansan aroor hore, in kastoo, si loo hubiyo in la sameeyo si loo soo qaado ka hor haddii taasi waxa weeye waxa aad jeceshahay. Meel kasta oo aad ku fadhiisan, aad loogu balan qaadayo in ay legroom wanaagsan iyo gelanayo in ay ka qaadaan qalabka aad.
Sida hore u soo sheegnay, waxaa jira saarnaa WiFi free, si aad ula socon karto oo dhan aad email iyo baahiyaha warbaahinta bulshada. Iyada oo ku xidhan tigidhka, waxaad sidoo kale madax karaa in macalinka lagu qadeeyo, halkaas oo aad ka heli kartaa cunto, cabitaan iyo cunto fudud. Haddii aad fadhiisanayso a qol fasalka-koowaad, cuntada si toos ah keeni doonaa, kursigaagu.
Dusseldorf ilaa London Eurostar Tareenka
Essen ilaa London Eurostar Tareenka
Munster to London Eurostar Tareenka
Leuven to London Eurostar Tareenka
Imaanshaha At Paris Gare Du Nord Tareen Station
Tareenadu ka St. Idaacadda Pancras yimaadaan dhexe ee Paris, ee saldhigga Gare du Nord. Tani saldhigga qurux badan waa shaqo of farshaxanka iniinahoodu ku dhex jiraan, ay tolnimo dhisay bartamihii 1800 iyo si qurux badan loo dayactiro. Waqti yar ku qaado si ay ugu raaxaystaan ​​dhismaha hor jeeda baxay si ay u booqdaan magaalada.
Maxaa yeelay, aad hore u dhamaysatay doonaa jeeg-in ka hor inta uusan UK aad uma baahan doontaa inaad buuxiso nidaamka imaatinka. Tani waxay sidoo kale waa run hadda ay gacanta baasaboor, in kastoo la UK ka tago EU waxaa ay u badan tahay waa in geedi socodka waxay mari doonan isbedel la taaban karo.
Marka aad timaado, aad u yeelan doontaa in wadnaha magaalada, iyadoo daraasiin doorasho ee cuntada, dukaamada iyo cabitaanada. Haddii aad doorato in aad ka tago saldhigyada, waxaad ka heli doontaa dhow Brasserie Terminus Nord, a famous Art Nouveau style restaurant directly across the road from the train station. Haddii kale, aad u baahan tahay si fudud in ay ku wareegaan jihada kasta si aad u hesho qaar ka mid ah cuntada ugu fiican iyo cabitaannada ee Europe.
saldhigga tareen laftiisa gudahood, waxaad ka heli doontaa Metro iyo Reer tareenada, iyo sidoo kale tareenada u safraya France oo dhan. biraha Local iyo tareenada Metro aad qaadi karto oo dhan caasimada Faransiiska, in badan oo ka matxafyada, galleries, iyo dalxiisayaasha soo jiidashada gudahood.
Haddii aad hore yimid oo cinwaan si toos ah u baxaan inay la meero ka hor inta aadan u hubiso-in si aad hotel, waxa kale oo laga yaabaa in fikrad fiican in ay ka faa'iidaystaan ​​ka mid ah fursadaha bidix boorsooyinka la heli karo gudahood saldhiga tareenka. xarumaha lagu kaydiyo Kuwanu waa raqiis ah oo noqon kara doorasho wanaagsan kuwa si aan u weyneyno maalmahoodii.
As a holder of the Eurostar direct train ticket, aad tahay awoodaan in ay helaan 2 waayo, 1 helitaanka badan oo matxafyo iyo meelo, oo waxaad badbaadin kartaa boqolaal doolar.
Frankfurt to London Eurostar Trains
Munich to London Eurostar Tareenka
Gawaarida ku taga London Tareenka Eurostar
Marseilles to London Eurostar Tareenka
Tareen Times Waayo, London Si Paris Iyadoo Eurostar
Eurostar ayaa inta badan ka waddaa, iyadoo ilaa 19 bixitaanka maalin kasta ku xiran tahay fasaxyada iyo maalmaha fasaxa. tareen hore ee maalintii ka tago garoonka 05:40 oo waxay qaadan doonaan guud ahaan 2 saacadood oo 37 daqiiqo. Tani inta badan waa mid ka mid ah tigidhada jaban laga heli karaa, sidaas haddii aadan nacay anigoo goor wanaagsan idiin badbaadin kartaa lacag iyo madax ka baxay qeybtii waaberiga. Faa'iido kale of this bixitaanka hore waa in waqti imaatinka ee Paris waa 09:17, taas oo macnaheedu yahay inaad leedahay maalin dhan idin hor hawlaha kasta oo aad jeceshahay in aad doorato.
jeer Route haddii kale waa saacaddii ama ka badan, oo aad ku helayso fursado badan taas oo si ay u doortaan. tareenka ugu dambeeya ee habeenka ka tago garoonka 18:31 iyo Gaaray 21:47, aad ka tago waqti badan si aad u hesho si aad hotel ama xataa madax baxay Idmo dabayaaqadii-habeen iyo peek a at the nalalka Quruxdiisa of Tower Eiffel. tareenada habeenkii Kuwani muuqan yaabaa in baabuurta qarsoodiga ah, kuwaas oo hab wanaagsan in ay la wareegaan dhowr daqiiqo oo hurdo ah ka hor inta sii on safarka ah. Intaa waxaa dheer, tareenada qaar ka mid ah inta u dhaxaysa meelaha caanka safri laga yaabaa in habeenkii oo dhan.
Den Helder in London tareenka Eurostar
Maastricht to London Eurostar Tareenka
Dijon ilaa London Eurostar Tareenka
Bonn to London Eurostar Tareenka
Wadooyin kale oo Tareenka Eurostar ah oo aan London ahayn ilaa Paris
Inkasta oo qodobkan waxaa diiradda inta badan safarka u dhexeeya St. Pancras International Station iyo Gare Du Nord, Eurostar ayaa sidoo kale ka shaqeeya tiro ka mid ah wadooyinka toos ah ka London:
Brussels – Tareenadu kasta oo ay maamulaan 90 daqiiqo oo ay ku 2 saacadood. Waxay qaadataa in ka badan 2 saacadood si ay u gaaraan Brussels Midi / saldhigga Zuid.
Calais / Frethun- Tareenadu saacaddii ama ka badan ay maamulaan ka London iyo guud ahaan safarka tareenka waa hal saac.
yar- Tareenadu tago ku dhowaad saacadoodba si Lille, oo ku yaalla waqooyiga France. Waxaa jira xiriir ah u fudud in ay ku network Faransiis TGV aad u kala iibsiga. waqti Journey waa qiyaastii 1.5 saacadood.
Disneyland Paris – Tareenadu ordi dhowr jeer todobaadkii sannadka oo idil oo maalin kasta inta lagu jiro fasaxyada dugsiga. Xaq u tareenka ka baxsan galo Disneyland ah. safar wuxuu qaadanayaa under 3 saacadood isugeynta.
Lyon, Avignon, iyo Marseilles- sanadka tareen hawl ka dhan 1 si ay u 5 maalmood toddobaadkii, inkastoo ay xilli ahaan waxaa saamayn si loo hubiyo in uu socda marka aad u baahan tahay. Waxaa istaago saldhiga Lyon Part-Dieu (4.75 saacadood), Avignon TGV station (6 saacadood) iyo Marseilles St Charles station (6.5 saacadood).
Amsterdam iyo Rotterdam – adeeg cusub oo bilawday 2018, aad si fudud u qaadan mid ka mid ah tareenada maalin kasta si Amsterdam, oo ay ku jiraan stop ah ee Rotterdam. mar gebi ahaanba safarka ku saabsan yahay 4 saacadood.
Waxaa jira waddooyin kale oo xiliga la heli karo hawlaha sida barafka jiilaalka, si loo hubiyo in si loo hubiyo dib inta badan si ay u arkaan haddii ay adeeg waa ordaya.
Waxa kale oo suurtogal in ay gaaraan meelaha kale ee Europe by isticmaalka hal muhuumsan iyo sii wadeen ka saldhigyada ku yaala Lille, Brussels, iyo Paris. Helitaanka tigidhada tareenka waa fududahay iyo waxay u baahan tahay kaliya hal faahfaahin ah.
Sidoo kale, haddii aad u safraya London ka kale ee UK, waxa kale oo aad dooran kartaa in aad bilaabayso safarka Eurostar at Ebbsfleet International Stations ama Ashford International Station halkii St. Pancras. Tani waa gaar ahaan waxtar leh si ay kuwa gaadiidka, sida Ashford bixisaa garaashka baabuurta la dhigto ah iyo helitaanka toos ah saldhiga tareenka.
Tigidhada Book Iyadoo Save A Tareen Waayo, London Si Paris tareenka
Raadi goobta si ay u tigidhada buugga oo dhan Meelaha ugu fiican Yurub, lugu daro Belgium, Italy, Switzerland iyo UK (oo ay ku jiraan tareen la Eurostar ee London in Paris). Our search engine waxaa loogu talagalay in loo badbaadiyo lacag tikidhada oo dhan waxaana ka mid ah ma ajuurada jaale. Waxaannu si sahlan si aad u iibsato by aqbalin in siyaabo kala duwan in ay mushaar, oo ay ku jiraan credit card, Giropay, fiican iyo qaar badan oo.
Sidaas, wax alla wixii aad sabab safarka, haddii aad keligaa ama dad kale lala safraya, qaado daqiiqado yar in la raadiyo tigidhada tareenka ee Save Tareenku, oo dalab qiimaha ugu hooseeya, damaanad qaaday.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta? Riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flondon-paris-train%2F%0A - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / PL inay / NL ama / iyo luuqado badan.
#garedunord #stpancras Eurostar London tareen safarka travelfrance travelparis uktravel